Semalt: Iingcebiso kunye Neengcango ezimangalisayo Ukukhusela kwiiNgcaciso zeWebhu
Ukuqhawula umngcipheko omkhulu ukuba ezininzi iinkampani okanye abantu bajamelana nemini yabo yemihlaimisebenzi. I-hacker inolwazi lokufikelela ulwazi oluthile ngokudala i-server yexeshana yewebhu engafanelekangakwaye isebenzisa iseva njengomthumeli wogaxekile. Hackers ikakhulukazi ekujoliswe kwiwebhusayithi ezinezokuphepha kuphela eziyisisekelo - sealing asphalt in montgomery county.
uNik Chaykovskiy, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo weMatriki iSemalt ,uyazi ukuthintela i-cyber izigwenxa ngokukhwabanisa:
Kubalulekile ukuhlaziya yonke iprojekthi yewebhu rhoqo ngangokunokwenzeka. Le ndlela,Inkqubo ikhusela umsebenzisi kwaye ikhusela abahlaseli ukuba bangene kwisiza. Ngenxa yoko, akunakwenzeka kubahlaseli ukufumana kudeukufikelela kwaye ulisebenzise kumnini. Omnye unokusebenzisa ababoneleli beCMS njengoMagento ohambisa izibuyekezo kunye neeplagi ukuba iiwebhusayithi ngokuqhelekileyose benzisa. Ukuthatha isenzo esinjalo kwenza umnini wesayithi isinyathelo esiphezulu ekukhuseleni abahlaseli abanenjongo enobungozi yokufumana ukungena emnyango kwisayithi.
Fakela iiplagi ezikhuselekileyo
Emva kokuhlaziya yonke isofthiwe, qinisekisa ukuba ugqithise kabini iwebhusayithi ngokufakaizixhobo ezikhuseleko ezifana neThemes ekwazi ukufumana nayiphi na indlela yokuqhawula nokuyilungisa. Isisombululo se-website yeSeteLock sokhuseleko singabonakalisa kwayeukususa yonke inkqubo engabonakaliyo kwaye uchonge nayiphi na into eyenziwe.
Iprotocol yokuTshintshiselwa kweTyhuseli ye-Hyper (HTTPS) yinkqubo yokukhusela eqinisekisa ukuba ukhuselekoukubhalwa kweenkcukacha zonke iinkcukacha ezithunyelwa phakathi kwe-browser kunye newebhusayithi. Injongo yalo kukugcina ingqibelelo yemfihlo kakhuluulwazi olufana nolwazi lwekhadi lesikweletu kunye namaphasiwedi..Iingcali zincoma ukuba izitolo ze-intanethi zisetyenziswe esi siphakamiso kwiimpawu zazo. KuUkuqinisekisa ukhuseleko olongezelelweyo, umsebenzisi kufuneka asebenzise i-HTTPS ngokubambisana neCandelo loKhuseleko loKhuseleko (SSL), kunye noKhuseleko lwezothutho lwezothutho.
Ukuhlaselwa kwe-SQL yokukhusela i-Sjl xa i-hacker ingakwazi ukufikelela kubaluleke kakhulu kubasebenzisiulwazi usebenzisa iparameter ye-URL okanye ifom yewebhu. Ukukhusela ukuhlaselwa kwe-SQL Injection, umntu kufuneka asebenzise imibuzo ephakamileyo. Baqinisekisa ukubaIkhowudi yomthombo wewebhusayithi ineemilinganiselo ezaneleyo zokukhusela nayiphi na indawo evulekileyo yabaxhasi ukuba bachithe.
Sebenzisa iMigaqo-nkqubo yoKhuseleko (Content)
I-script ye-cross-site (XSS) ngokuqhelekileyo ukuhlaselwa apho i-hacker iqhuba kakubiizikripthi kwiwebhusayithi evunyelweyo. Imibuzo yeParameteri zixhobo ezisetyenziselwa ukukhusela ezi hlaselo ukuqinisekisa ukuba kwakhona akukho ndawo ihlala ingenamntukubaxhasi ukuba bangene ngemvume. Imigaqo-nkqubo yezoKhuseleko ikwabaluleke kakhulu ekukhuseleni ukuhlaselwa kwe-XSS njengoko kuvumela ukungena kwimimandla ethile.Isikhangeli sesigunyaziso kuphela kwaye sivumela ukungena kumthombo weskripthi ochanekileyo. I-CSP ichonga izikhangeli ezichanekileyo kunye nezobuxoki.
Kubalulekile ukuba umnini-mhlaba asebenzise iiphasiwedi eziyinkimbinkimbi abaceki abakwaziyozichonga kalula. Kwenzeka kuphela ukuba umnini udibanisa abalinganiswa abakhethiweyo, iinombolo kunye neeleta zephasiwedi.
Ukufakela iCandelo loLawulo lathisi
Abahlaseli bahlaziya iikhomputha zomphathi kunye nokubhaliswa kumncedisi wewebhu.Basenokukhangela amagama afana 'nokufikelela,' okwandisa amandla okweqhwaba ukuba athathaka ukhuseleko lwewebhusayithi. Ukunciphisa ithubaOku kuyenzeka, qinisekisa ukuqamba kwakhona zonke iifolda zomlawuli.
Kuqikelele ukuba ube kwicala elikhuselekileyo ngokuhlawula idoli ephezulu malunga nezibonelelo ezikhuselekileyo zokukhusela.Ukuxoxwa ngentla, ziyisixhenxe zeengcebiso eziphambili ezifanele ukuqala lewebhu.